Beyoncé oo aad u xiiseeya CBD ayaa ku dhawaaqday inay dhiseyso Beer Hemp • Daroogada Inc.eu
Xamaasadda CBD Beyoncé ayaa ku dhawaaqday inay dhiseyso Beer Hemp ah
Beyoncé waxay caan ku tahay taageerayaasheeda daacadda u ah tiro aad u badan oo dadaal xirfadeed ah halyeey cod ilaa agaasime filim. Dhawaanahan, si kastaba ha ahaatee, megastar -ka caalamiga ah ayaa ballaarinaya baaxaddiisa ballaadhan ee qaybaha beeraha iyo dhaqashada shinnida maadaama ay dhawaan ku dhawaaqday inay “dhis beer hemp iyo malab".
Sheeko dabool ah oo dhowaan ah, Beyoncé waxay daaha ka qaadday sida xannibaaddu ugu dhiirrigelisay inay "ka gudubto samir-doonka si ay u abuurto caadooyin wanaagsan oo ku saleysan jiilalkii hore isla markaana ay doonayso inay wax iska dhigto."
“Waan ogaaday CBD marka arrimuhu yara yara yaraadeen, oo aan la kulmay faa'iidooyinkeeda xanuunka iyo bararka. Waxay iga caawisay habeennimadaydii aan xasilloonayn iyo xiisaha ka dhasha inaanan seexan karin. ”
Fanaanadda heesa-heesta ayaa shaaca ka qaadday sida ay mudnaanta u siisay caafimaadkeeda iyo samaqabkeeda maskaxeed iyo tan qoyskeeda-oo ay ku jiraan Blue Ivy oo sagaal jir ah iyo mataanaha afar jirka ah ee Rumi iyo Sir.
Beyoncé ayaa sidoo kale ku firfircoon dhaqashada shinnida
Ka sokow dhisitaanka beer -hemp, Beyoncé waxay sidoo kale qorshaynaysaa inay ballaariso hiwaayadeeda ah dhaqashada shinnida hawlgal ballaaran. Ganacsadaha shaaca ka qaaday in qoyska shinni (ilaa 80.000!) laba kabadh oo saqafka gurigooda ku yaal. Shinnida ayaa la sheegay inay soo saarto boqolaal dhalooyin malab ah sannad walba.
"Waxaan malab ka helay sifooyin bogsiinaya aniga iyo carruurtayda," ayay tidhi. "Waxaan bilaabay finan -ka sababtoo ah gabdhahayga, Buluug iyo Rumi, labaduba waxay leeyihiin xasaasiyad aad u xun malabkuna wuxuu leeyahay sifooyin bogsiineed oo aan tiro lahayn."
In kasta oo shirkado gooni ah, hemp iyo malabku ay noqon karaan isku -darka wax ku oolka ah, labadaba caafimaadka aadanaha iyo deegaanka.
Daraasad dhowaan, oo lagu daabacay Bey'adda Deegaanka, ayaa la ogaaday in shinnida ku nool Mareykanka ay hadda u adeegsadaan dalagyada hemp sidii ilaha lagama maarmaanka u ah nafaqada. Tirada beeraha hemp ayaa ku qarxay Mareykanka ka dib markii la soo bandhigay Sharciga Beeraha ee 2018, kaas oo xalaaleeyay beerista hemp heer federaal.
Ninkeeda bilyaneerka ah ee heesaha heesaha ah ee Beyonce, Jay-Z, ayaa sidoo kale soo galay warshadaha xashiishadda markii la bilaabay sumcadiisa qaaliga ah ee Monogram. Shirkadda ayaa dhowaan magacawday agaasimaha guud ee cusub, Troy Datcher.
Ilo ay ka mid yihiin Canex (EN), Forbes (EN), Harpers's Bazaar (EN), Bandhig Faneed (EN)
Bukaannada Fibromyalgia waxay yareeyaan xanuunka iyo hurdada oo la wanaajiyo ka dib daaweynta xashiishadda daawada
Bukaan -socodka laga helay fibromyalgia iyo cudurrada kale ee rheumatic -ka ayaa soo sheega xanuunka oo yaraaday iyo tayada hurdada oo la hagaajiyay ...
Xashiishad caafimaad 'ka sun yar' kansarka caadiga ah
MANILA - Xashiishadda daawada ah ayaa daawo fiican u ah bukaannada la ildaran qallalka suuxdinta, kansarka ...
Quful xirantu waxay kordhisaa isticmaalka xashiishka iyo xashiishka ku kora guriga
Nederland - Cilmi baaristii ugu dambeysay ee uu sameeyay machadka Trimbos ayaa muujisay in sanadkii la soo dhaafay ...